Siilaanyo oo raba inuu ceebta iska meyro oo booqday qaxooti ka yimid Yemen * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Siilaanyo oo raba inuu ceebta iska meyro oo booqday qaxooti ka yimid Yemen
By A warsame	 Last updated May 31, 2015
Mareeg.com: Madaxweynaha maamulka Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo safar ku jooga Berbera ayaa maanta wuxuu ku booqday xarumaha lagu nasiyo dadka qaxootiga ah ee ka soo cararay dagaalka Yemen.
Madaxweynaha oo qaxoontiga soo dhex maray waxa uu kor u qaaday qaar ka mida caruurtii ku sugnayd kaamka qaxoontiga oo ah kaamka koowaad ee loogu talogalay dadkaasi isugu jira barakacayaasha Soomaaliyeed ee Berbera kasoo degay iyo kuwa Ethiopian-ka iyo Yemeniyiint ah.
Madaxweynaha ayaa sheegay in dadka qaxootiga ah ee Soomaaliland soo gaadhay aanay shicib iyo dowladuba waxba kala hadhay qaabilaadda qaxootiga jinsiyad kasta.
“Aad iyo aad baanu u soo dhaweynaynaa qaxoontiga dalkayaga yimid, ee ka soo cararay dhibaatooyinka, waajib bay nagu tahay oo waa xil na saaran, xil weyna waanu iska saaraynaa inaanu dadka qaxoontiga ah soo dhaweyno, oo u ambabixino guryahoodii wixii aanu u qaban karana u qabano, waxaanu kala hadhaynaana ma jiro, Allena ha inagu garab galo” ayuu yiri Siilaanyo.
Wuxuu kaloo madaxweynuhu ugu baaqay hay’adaha caalamiga ah inay taakuleynta looga baahanyahay u fidiyaan dadkaasi sidii ay u gaadhi lahaayeen deeganadoodii.
Maamulka Somaliland ayaa todobaadkii hore ku dhawaaqay go’aan aad loo dhaleeceeyey oo ahaa ineysan Berbera kasoo degi karin qaxootiga u dhashay Koonfruta Soomaaliya ee ka imaayana Yemen.
Hase yeeshee maamulka Somaliland ayaa shalay go’aankaas dib uga laabtay kadib markii ay arrintaas aad uga caroodeen shacbaka deegaannada uu maamulkaasi ka taliyo.
Markab loo dirayo qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan Yemen